Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba ubomi bentombazana abuboni nje. Ngobuhle bakhe, ingqondo ephilileyo kunye nengqondo ephosakeleyo yokuhlekisa, amadoda awamthobeli. Kwaye ke, xa bonke abahlobo sele benelisekile emtshatweni kwaye banabantwana, kwaye banokuphelelwa lithemba kwaye bangathembeki ukubusa emphefumlweni wakho, ungazama ukufumana uthando lwakho ngokuqhelana nabo ngokusebenzisa i-arhente yomtshato.
Xa uqala ukukhangela isiqingatha sesibini, khangela uluhlu lweenkonzo zokuthandana kwisixeko sakho. Ungakhethi ngokungaqhelekanga. Bahlaziye bonke, badibana kwaye bathethe nabameli babo ukuba bafumane ngubani omele anikwe ukukhetha ukufumana ididi.
Indlela yokukhetha i-arhente yomtshato?
Emva kokuba ufune ukufumana umntu obathandayo ngumbhalisi, qaphela kwaye uqaphele. Ngelishwa, inkohliso kunye neengcingo zihlala zifunyanwa phakathi kwabameli beenkcukacha.
Kukho imigaqo emininzi yokukhetha i-arhente yokuthandana. Bakukukhusela kwaye banike umphumo wokukhangela.
Qinisekisa ukuba i-ejensi oyikhethile ine-ofisi yangempela. Unokwenza, ngokuqinisekileyo, usebenzisa isevisi yangempela, kodwa ke ungalindelanga ukuba babe noxanduva lwempembelelo. Ukuba kukho into engalunganga, i-egosa enetyala ayifumaneki.
I-arhente ngalinye elibandakanyekayo kwimitshato yomtshato kufuneka libe nerejista yelizwe, ngoko ke, kufuneka ibe nedilesi esemthethweni, igama elisemthethweni, ilayisenisi, i-akhawunti yasebhanki, isitampu, njl njl. Musa ukuvila ukubuza abasebenzi bele nkonzo malunga nemitshato ephumelelayo, kufuneka babe neenkcukacha kunye nabo. Fumana ukuba kukho ithuba lokunxibelelana nabaxhasi beli arhente, sele sele befumene isibini.
Ekupheleni kokukhethwa kwe-arhente, funda malunga nokuhlaziywa nganye kwi-intanethi - oku kuya kukunceda wenze isigqibo esinjongo.
Nceda uqaphele ukuba abasebenzi beenkonzo ezinjalo kufuneka babe ngabafazi abaneminyaka emibini esele betshatile. Amantombazana amancinci aloo msebenzi angaba nomdla ekuhleleni ubomi babo kwaye akayi kukukhathalela kwaye akunyamekele.
Musa ukuyihoxisa isiphelo sesivumelwano kunye nenkonzo yokuthandana, kodwa uya kubahlawula iinkonzo zabo. Ukuze ungahlali kunye neempumlo, ilungiselelo lamaphepha aliyi kuba lukhulu.
Isiseko sokukhangela isiqingatha sakho sesibini siya kugqitywa kwemibuzo. Ukuthetha ngawe, thatha ixesha lakho, ukhanyise zonke iimpawu zakho ukusuka kwicala elifanelekileyo. Yenza umfanekiso othakazelisayo kuwe ukuze isini esahlukileyo sinomnqweno obaluleke kakhulu wokukukwazi. Kodwa ungagqithisi, uxelele ngeempawu zakho ezilungileyo, ungakulibala ukukhankanya ukungaphumeleli okanye iimpawu. Ngubani ngaphandle kwabo? Ukuba utshaya, musa ukufihla le njongo, ukuze kamva kubekho ukungaqondi kakuhle nabasemagunyeni.
Inqaku elibalulekileyo lemibuzo lemibuzo yifoto. Kungcono ukuba kukho ezininzi. Iifoto kufuneka zibe ngobungcali bobugcisa. Ukuzibonakalisa kwii-angles ezahlukeneyo, khetha isithombe kwiimifanekiso ezahlukahlukeneyo-isitayela sokuthandana, ishishini, ngokuhlwa. Oku kuya kuba yongezwa kuphela kwi-questionnaire yakho.
Igosa lomtshato lithatha umyeni?
Ukufunda idatha yakho kwiphepha lemibuzo kunye nokukhetha ngokuchanekileyo abaviwa, ii-agosa ziya kulungiselela intlanganiso nabafakizicelo abaninzi ngexesha elifutshane. Emva koko uya kufuneka wenze ukhetho oluvela kumadoda ambalwa owawuthanda kakhulu. Oku kukhethwa kusekelwe kwikhokhnoloji yokwenza uphando, esetyenziswa yiingcali ezikhokelayo kule ndawo.
Ngexesha leentlanganiso, iimfuno zakho kunye neemfuno zabaviwa bangatshintsha. Zingatshintshwa kwiphepha lemibuzo, zixubushe kunye neengcali zesebe lomtshato.
Kwakhona, ii-arhente zomtshato zinikeza intlangano yeentlanganiso, imitshato kunye nemibhiyozo ngaphambi komtshato. Banikela ngenkxaso yokuziphatha kunye nengqondo, bafundise indlela yokuziphatha kakuhle kwiintlanganiso, ukwenzela ukuba isiphumo sokukhangela siphumelele ngangokunokwenzeka.
Ekugqibeleni, ndifuna ukuthetha ukuba kukho imishado emininzi ephumelelayo ngenxa yokuzibandakanya kwi-arhente yomtshato. Namhlanje inkulungwane ye-21, kwaye ekusebenziseni iinkonzo ezinjalo iinkonzo akufanele zihlaziye. Kule nqaku, iinqununu eziphambili zokufumana isiqingatha sesibini zidweliswe, zisebenzela iinkonzo zokuthandana. Ukujongana nabo okanye kungekhona kuwe.
Ukuzivocavoca ukulahlekelwa ngumzimba wonke umzimba
UDmitry Khvorostovsky wafumanisa ukuba unesifo somzimba
Sangria ngewayini elimhlophe
Iingcebiso zesini ezi-10 kuzo zonke izihlandlo